EyeDwarha 26, 2018 admin
inkundla kulamlo lokugqibela chinese bulawula Bitcoin ukhuselekile ngokusemthethweni impahla
Inkundla kulamlo lokugqibela Chinese ifumanise ukuba nangona countrys iiBhanki ezingoovimba ukuvimbela yorhwebo cryptocurrency, Bitcoin kufuneka kukhuseleka ngokusemthethweni ipropati neenqobo zoqoqosho. I Shenzhen Court of International yoLamlo lapapasha uhlalutyo icala nge WeChat, echaza isigqibo sayo kwimbambano kutshanje kwezoqoqosho ebandakanyekayo isivumelwano soshishino enxulumene ilifa kunye nokudluliswa asethi crypto.
Somlali yathi akukho mthetho e China njengangoku othintela eli ilifa Bitcoin kwaye intengiselwano yayo phakathi kwabantu. Further, ukuba uthe kungabikho nobunzima yobugcisa ngokuthumela Bitcoin logama nje umntu ine Idilesi Bitcoin kunye iqhosha labucala. Inkundla lugqibe kwelokuba, nokuba Bitcoin yi ithenda somthetho okanye, ayinayo nefuthe kwinto yokuba Bitcoin ubunini kufuneka bakhuselwe isekelwe ngokwasemthethweni Chinas umthetho contract, ungeza: “Bitcoin na uhlobo wepropati, nabanako kwaye elilawulwa ngamaqela, kwaye liyakwazi ukunika amaxabiso kwezoqoqosho kunye nezibonelelo.”
Blockchains isipaji hardware olutsha luvumela crypto norhwebo crypto
block Chain, omnye ababoneleli-software isipaji mdala kushishino cryptocurrency i isungula imveliso yayo yokuqala hardware. Ngokubambisana ne Ledger, ke ndaqalisa ukusebenzisa ii-odolo umtshini ophathwa ebizwa yebhokisi entsha, eqala lokuthumela kwinyanga ezayo. CEO Blockchain co-umsunguli Peter Smith wathi ukongeza ukugcina imali ngaphandle kweintanethi njengezinye izixhobo, uya kube lula abathengisa crypto-to-crypto nge Tshintsha, labathengisi companys lomthonyama, leyo uqala kwiveki ezayo.
I Blockchain CEO wahlabela mgama wathi “Yeyethu, Whats ngokwenene kubaluleke ngoku ukufumana imveliso ukuya kwindawo apho awufuni kwezinye iindawo ukuze ukugqiba izenzo zakho umsebenzisi in crypto.” Ledger umongameli Pascal Gauthier uthe “Iimveliso zethu, ungaya ukusuka abandayo yokugcina eshushu uVuyo yaye isixhobo soze kutyhila isitshixo, ngoko kuthetha ukuba kuvula iindlela ezininzi, ingakumbi abathengisi.”
Sony iphuhlisa licwecwe isipaji crypto zekhompyutha
Electronics giant Sony liqulunqe ubuchwepheshe ukunceda abasebenzisi cryptocurrency ukugcina asethi zabo ngaphezu ukholosile, kwaye oku ezobuchwepheshe besabuya kungekudala ukugcina kufuphi kuwe. Tech yeMetro yaseJapan ubhengeze ukuba inkululo yayo Computer Science Laboratories (Sony kusukela) beqale ukuba isipaji cryptocurrency iintsimbi ezinokusetyenziswa ukugcina Bitcoin kunye nezinye ii-asethi digital ngendlela intanethi kwindawo ekhuselekileyo lo gama kugcinwe lula iinkqubo zokugcina crypto online kangako-ekhuselekileyo.
Ngokungafaniyo izipaji cryptocurrency hardware aqhelekileyo efana Trezor One kunye Ledger Nano S, leyo ukuqhagamshela kwi PC kubasebenzisi okanye isixhobo esiphathwayo usebenzisa intambo USB, Sony CSLs isipaji wayeza ukugcina abasebenzisi nezitshixo zabucala kwi licwecwe IC ikhadi, unika umsebenzisi ukuba ungene ngokulula imicimbi ukusuka isixhobo lune-amandla mobile.
Ingxelo Daily Market Kraken for 25.10.2018
$45.5M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Hey Daily Team Altcoin! Let&#...
Post Previous:Crypto News 24.10.2018
Post Next:Crypto News 27.10.2018